सिन्धुलीमा थपिए ४३ जना संक्रमित, गम्भिर विरामी बढ्दै : RajdhaniDaily.com -
Home Breaking News सिन्धुलीमा थपिए ४३ जना संक्रमित, गम्भिर विरामी बढ्दै
सिन्धुली । सिन्धुलीमा थप ४३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जिल्लाबाट संकलन गरि पठाईएको १ सय २३ जनाको स्वाव परिक्षण गर्दा ४३ जनामा संक्रमण देखिएको हो । संक्रमितमा २० जना महिला र २३ जना पुरुष रहेको स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
संक्रमित हुनेमा सिन्धुली अस्पतालका एक चिकित्सक, प्रशासनका एक कर्मचारी, नेपाली सेनाको वर्दबहादुर गणका १ र नौ नं. बाहिनीका ४ जना गरि ५ नेपाली सेना, कमलामाई नगरपालिकाका एक कर्मचारी, बाणिज्य बैंक सिन्धुली शाखाका कर्मचारी, प्राईम बैकका कर्मचारी, एनआईसी एसियाका कर्मचारी, केहि व्यवसायीहरु र केहि सर्वसाधारण रहेका छन् ।
नयाँ देखिएका संक्रमित मध्ये १४ जनालाई एपोलो अस्पतालमा तयार गरिएको कोभिड १९ उपचार केन्द्रको आइसोलेसनमा राखिएको छ भने अन्य संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा रहेको सिन्धुली अस्पतालका व्यवस्थापक बिमल श्रेष्ठले बताएका छन ।
शुक्रबार देखिएका संक्रमित सहित जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ सय ९ पुगेको छ । उनीहरुमध्ये एपोलो अस्पताल र सिन्धुली अस्पतालमा गरि ३७ जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचारत रहेका छन भने ७६ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन ।
सिन्धुली अस्पतालमा अब आइसोलेसन वेडको अभाव भएको छ । कोभिड संक्रमितका लागि अस्पतालमा अब ५ वेड मात्र बाँकी रहेको छ । बाँकी सबै वेडमा विरामी रहेका छन् । अस्पतालले लक्षण सहितका विरामीलाई र होम आइसोलेसनमा बस्न समस्या रहेका विरामीको लागि मात्र अस्पतालमा भर्ना लिएको छ ।
सिन्धुलीमा आइसोलेसन वेड ४७ वटा मात्र छन । केहि दिन अघि मात्र थपिएका वेडमा विरामी राख्न सुरु गरिएको छ । तथापी उक्त आइसोलेसन वेडले विरामीलाई प्रयाप्त हुन नसकेको सिन्धुली अस्पतालका व्यवस्थापक श्रेष्ठ बताए । उनका अनुसार अब विरामीको उपचारका लागि समस्या हुन थालेको छ । सिन्धुली अस्पतालमा ४ जना विरामी गम्भिर अवस्थाको लक्षणका साथ उपचार गराईरहेका छन । उनीहरुमा अत्यधिक ज्वरो, खकारमा रगत देखिने लगाएतका लक्षणहरु देखिन थालेका छन । अस्पताल व्यवस्थापनले आइसियु र भेन्टिलेटर नभएकाले गम्भिर प्रकृतिका विरामी बढ्न थालेमा समस्या हुने बताउन थालेको छ ।
बढ्दै बजारमा भिडभाड
लकडाउन खुलेसँगै जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्रमा भिडभाड बढेको छ । जिल्लाका दुधौली, कमलामाईको भिमान, सिन्धुलीमाढीका बजारहरु, खुर्कोट बजार, मरिणको कपिलाकोट लगाएतका बजार क्षेत्रमा भिडभाड बढ्न थालेका छन । भिमान, शनिबारे हाट, बुधबारे हाट, जस्ता हाटबजारहरु चल्न थालेका छन ।
यातायातका साधन चलेको र दशैं नजिकीएसँगै बजारहरुमा भिडभाड बढेको छ । मास्क नलगाउने, भौतिक दुरी कायम नगर्ने, सार्वजनिक भेला, कार्यक्रमहरु निर्वाध चल्ने गरेका कारण पनि कोभिडको संक्रमण बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन ।
तराईका जिल्लाहरु र काठमान्डौ लगाएतबाट आवत जावत बढेसँगै कोरोना संक्रमण समुदायमा पुगेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा समेत समस्या हुन थालेको छ । नागरिक स्तरबाट समेत कोरोना संक्रमणको दर बढ्नेमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
आलोक यादव - September 23, 2020
निराजन पौडेल - July 10, 2020
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - February 7, 2021
काठमाडौँ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत कम्पनी ढाँचामा लगानी मोडालिटीको...
Exclusive पूजा चँदारा - August 18, 2020
Editor-Picks चिना बिक - June 2, 2020
विदेश एजेन्सी - November 2, 2020
Breaking News प्रशान्त वली - March 7, 2020